Foxconn waxay kubiirtay ganacsiga gawaarida korontada. Bayaanka ujeedooyinka? | Waxaan ka socdaa mac
Foxconn waxay kubiirtay ganacsiga gawaarida korontada. Bayaanka ujeedooyinka?
Xanta ku saabsan gaariga korontada ee Apple ayaa sii kordheysa. Hore ayaan uga soo hadalnay saadaalinta falanqeeyayaasha maaliyadeed ee waaweyn iyo waliba kuwa ay fuliyaan kuwa kale sida Kuo, oo tilmaamaya taariikhda bixitaanka ee gaariga Apple Apple. Apple waxay ku tiirsan tahay alaab-qeybiyeyaasheeda si ay u fuliso istiraatiijiyaddiisa. Foxconn waxay go’aansatay inay gasho ganacsiga baabuurta korontada ku shaqeysa. Tani macnaheedu maahan in Foxconn uu isu diyaarinayo mustaqbalka?
Ma naqaano haddii wararka xanta ah ee ku saabsan gaariga korontada ee Apple ugu dambeyn ay ku rumoobi doonaan waqtiyada loo qabtay ama ku xusan falanqeeye Kuo. Waxa aan ognahay ayaa ah in shirkadda iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee keena Apple, wuxuu la wareegayaa ganacsiga baabuurta korontada Byton. Shirkad leh natiijooyin maaliyadeed oo aad u wanaagsan illaa Julaay 2020, taas oo ay ku joojisay howlaheeda ayna ku khasbanaatay inay ka saarto inta badan shaqaalaha.
Sida ay sheegayaan wararka. waxay qorsheyneysaa inay maal gashato ilaa 200 milyan dollarka shirkadda si ay u bilaabaan soo saarista baaburka Byton M-Byte ee la qorsheeyay rubuca hore ee 2022.
Shirkadaha tiknoolajiyada ayaa maalgashanaya lacag aad iyo aad u badan horumarinta jiilka soo socda. Oo ay ku jiraan gawaarida korontada si buuxda u shaqeysa iyo tikniyoolajiyadda casriga ah ee la socota, sida wadista iskiis u madaxbanaan iyo nidaamyada isgaarsiinta baabuur-ka-baabuur.
Hadda waxaan haysanaa laba ikhtiyaar, feker ahaanteyda meesha ku habboon warkan:
Foxconn ayaa raba kala duwanaanta ganacsigaaga iyadoo la tixraacayo ku dhawaaqida Apple inay kala qaybinayso silsiladdeeda. Dhinaca Shiinaha iyo dhinaca kale, kan adduunka intiisa kale. Kala duwanaanshahani wuxuu saameyn ku yeelan karaa Foxconn iyo ganacsigeeda alaab-qeybiye u ah Apple.
In shirkadu rabto inay bilowdo khibrad hel dhinaca gawaarida korontada ku shaqeeya. Sidan ayaad si wanaagsan ugu diyaar garoobi doontaa marka Apple ay rabto inay bilowdo sameynta gaarigeeda Apple Car.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Foxconn waxay kubiirtay ganacsiga gawaarida korontada. Bayaanka ujeedooyinka?
Prosser wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka AirTags
Shixnadaha AirPods Max waxay sii wadaan inay ku daraan daahitaanno